Dargaggoonni waggaa 15-24 jidduutti argaman hubannoon HIV irratti qaban gadaanaadha jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Dargaggoonni waggaa 15-24 jidduutti argaman hubannoon HIV irratti qaban gadaanaadha jedhame
Itoophiyaatti hubannoon dargaggoonni umuriin saanii waggaa 15-24 jidduutti ta'e waa'ee HIV irratti qaban baayyee gadaanaa ta'uu qorannoon tokko mul'ise.
Wayita ammaa kanattis namoonni kuma 70 ol ta'an vaayirasii HIV dhiiga isaanii keessatti argama. Haalli tamsa'inaa naannoodhaa naannootti garaa garaa ta'ulleen, magaalaa Finfinneetti n cimaa jedhameera.
Keessattu shamarran gara harki 76 ol ta'an ammoo waa'ee karaawwan HIVn ittiin daddarbuu fi malawwan ittisaa irratti hubannoon qaban baayyee gadaanaadha.
Dhiiroota keessaayis kan sirriitti kana hubatan harka 39 qofaadha.
Weerarri HIV Eedsii yaaddoo haaraa uume
Waajjira Ittisaa fi To'annoo HIV Fedaraalaatti daarektarri qunnamtii sabqummataa Obbo Daani'eel Batira akka jedhanitti, kanaaf sababni qaamooleen hojiisaanii haalaan bahu dhabusaanitiin.
Qaamoolee kunneenis manneen marii ummataa, dhaabilee amantaa, waldaalee vaayirasiin HIV dhiigasaanii keessa jruu, dhaabbilee midiyaa, oggantoota hawaasaa fi dhaabbilee gargaarsaati.
Wayita qaamooleen kunneen waa'ee HIV ciminaan barsiisaa turanitti dargaggoonni har'aa kunneen daa'iima tura.
Tibba ammaa yeroo waa'een HIV itti hindubatamneettis, umuriin isaanii qunnamtii saalaatiif waan qaqabeefuu balaa vaayirasichaatiif saaxilamtoota ta'aniiru jedha obbo Daani'eel.
''Dargaggoonni kunneen baayyeen isaanii barnoota sadarkaa lammaffaa, dhaabbilee barnootaa olaanoo, lafa hojii ijaarsa omisha anniisaa, dhaabbilee qonna daraaraa gurguddoo fi warshaalee keessatti argamu.''
Kanaafuu hubannoo gadaanaa qaamooleen hawaasaa kunneen qabaniin walqabatee, tatamsa'inni HIV umurii kanaa olaanaa akka ta'u gumaateera.
Akka obbo Daani'eel jedhanittis lakkoofsi namoota HIVn du'anii sadarkaa biyyaatti haalaan gadi bu'unsaa callisaa fi of dagannaa itti uumeera.
Karaa gara biraatinis haalliiwwan dargaggoota HIV fii saaxilan dabalaa jira.
Kanaafuu, haalli tatamsa'inni vaayirasichaa har'a gadi aanaa fakkaatulleen, dabaluun haalawwan balaaf isaan saaxilanii garuu
"Amma dubbachu kanan barbaadu, har'a ofidagachuun kuun bori kan gatii olaanaa nama baasisu ta'a," kan jedhan oboo Daani'eel, biyyattiin dhaloota fayya buleessaa fi humna omishaa qabaachu yoo baatte hiyyummaa irraa bilisa ta'u hindandeessu jedhu.
Dargaggoota kanneeniin alattis, dubartoota hojii mana bunaa hojattan, konkolaachiftoota daandii qaxxaamuraa fi namoota nama hidhaatti argaman biratti tatamsa'inni HIV baayyee olaanaadha.
Rakkoon kana qofaa miti. Lakkofsi namoota yeroo yeroon qorannoo fi hordooffii HIV taasisan gadaanaa ta'usaati.
Waggaa waggaa bara hunda ALI Sadaasa 22 kan kabajamu guyyaan farra HIV addunyaa, bara kanas mata duree "Ammas xiyyeefannoon ittisa HIV tiif"jedhuun.
Itoophiyaa: Weerarri HIV/Eedsii yaaddoo haaraa uume
Dhukkubsattootaaf 'antiibaayotikii' utuu hin taane boqonnaatu barbaachisa - ogeeyyii fayyaa